Nuxurkii khudbadii madaxweynaha DFS farmaajo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Nuxurkii khudbadii madaxweynaha DFS farmaajo
Nuxurkii khudbadii madaxweynaha DFS farmaajo
Muqdisho, Febaraayo 06, 2021; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uga warbixiyey Shirkii Wadatashiga heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ee ku qabsoomay magaalada Samareeb ayaa ku bogaadiyey Labada Aqal ee Baarlamaanka sida ay uga qeyb qaateen in dalku aanu gelin firaaq-dastuuri ah.
“Waxaan tanaasulka ka soo bilownay sharcigii doorashada ee ay Golahani meelmariyeen, ilaa shirka aan hadda ka soo laabannay ee Samareeb.
Waxaana gaarsiiyey heer ay gacantooda ku soo qortaan heshiiskii 17-ka sebteembar 2020, anigoo u arkayey in ay muhiim tahay midnimadeenna iyo wadajirkeenna si loo gaaro heshiis siyaasaddeed oo ka turjumaya hiigsiga shacabka Soomaaliyeed”Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay caqabadaha siyaasadeed ee soo wajahay heshiiskii doorashada, kuwaas oo ka yimi maamulada Puntland iyo Jubbaland oo diiday dhaqan-gelinta qodobbadii ay horey u saxiixeen, taas oo muujisay sida ay uga caga-jiidayaan qabsoomidda doorasho loo dhan yahay.
”Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in ay iswaansan doonaan oo u turi doonaan dalka iyo dadka Madaxda Dowlad-goboleedyada ee ka caga jiiday fulinta heshiisyadii doorashooyinka ee ay horey u ansixiyeen, isaga oo adkeeyey muhiimadda midnimadu iyo in loo tanaasulo danta guud.
Previous articleOrange iyo Vodafone ayaa xaqiijinaya qorshayaasha lagu dalbanayo rukhsadaha Isgaadhsiinta Itoobiya
Next articleDawladda Soodaan ayaa gardarro ku tilmaantay buuxinta biyo-xidheenka Itoobiya.
Waa maxay sababta madaxweyne Farmaajo uu u Tagi waayo Mareykanka
Mareykanka oo ka hadlay quqeyn uu ka fuliyay Jubbada Hoose